कविताः कायर साम्राज्यवाद - Everest Dainik - News from Nepal
कविताः कायर साम्राज्यवाद
ह्वाइट हाउसका रैथाने बाजहरु
आँखामा कालोपट्टि बाँधेर दमासकसमा
युद्धको तुवाँलो भित्र अँध्यारो जोखिरहेछन् !
अबोध नानिहरुका ओछ्यानमा
आणविक बम बिछ्याउँदै
छियाछिया बनाएका छन्– कलिला तनहरु !
गुँड नफिर्दै बाटोमै हराएका छन्
जिवनको अक्षरपढ्न पाठशाला हिंडेका बचेराहरु
बाँस नफर्किएर पसलमै विलायकाछन्
नुनकिन्न गएका कयौं आमाहरु !
याे पनि पढ्नुस अटल बिहारी वाजपेयीकाे प्रसिद्ध कविता: मृत्युसँग जोरी
धर्ती ओभाएकोछैन आलो रगतको भेलबग्दा
चौतर्फी बमका दिवारले रोकिएको छ !
स्कुले नानिहरुको रगत पोखिएकोछ !
यतिबेला दमासकस गहिरो पीडामा छ !
साम्राज्यवादको जुठेल्नुमा लट्पटिँदै
अल असद र वान कि मुनहरु(निदाईरहेछन्
विश्वभर मानवाधिकारको घण्टी ठोक्नेहरु
खै रु सद्देछन् वा धतुरो खाएकाछन् !
याे पनि पढ्नुस कविता : सधैं तेरो रहँदैन वैशको झड्का
कयौं मोहोम्मदहरुको प्राण निचोर्दै
छातिमा बारुद सल्काएका छन् !
विश्व शक्तिशालीको ध्वासेदिने साम्राज्यवाद
कति तर्सिएछ( ती कोमल मान्छेहरुसँग !
कति आतंकित भएछ– ती मुनाहरुसँग !
अनि( चिचिला नानिहरुसँगै
यस्तो थरथरी काँप्ने तिमी
कसरी भयौ विश्व शक्तिशाली !
शक्तिशाली त हुँनै सक्दैनौं तिमिहरु !
दुनियाँकै कायर् रहेछौ बरु !!
याे पनि पढ्नुस कविताः आकाश गंगा